Indlu epholileyo yothando kwintlambo yeTowy ephezulu
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Indawo yesi-8 yindlwana entle, ejonge emazantsi ekupheleni kwendawo ethe cwaka, enecobbled, ithala eRhandirmwyn enombono omangalisayo wentlambo yaseTowy. Ummandla ucebile kwimbali, i-Twm Sion Cati (i-Welsh Robin hood) ifihliwe emthethweni emqolombeni waseDinas, ngoku i-RSPB yokugcina. Ilungele ukuhamba endulini, ukukhwela ibhayisekile, ukuqubha, okanye ukuphumla nje. Bona iikhayithi ezibomvu kunye noonomatse. okanye ukonwabele nje imbonakalo yegadi kunye ne-cuppa yakho yasekuseni. Isibhakabhaka siyamangalisa ngobusuku obuzolileyo, bona indlela yobisi kunye neenkwenkwezi ezidubulayo!
Indawo yesi-8 yindlwana egcwele ubuntu eyakhiwe ekuqaleni kwenkulungwane ye-19 njengendawo yokuhlala yabasebenzi basezimayini abakhokelayo. Inento yokutshisa iinkuni ngeengokuhlwa ezihlwahlwazayo emlilweni kwaye ikhutshwe ngomxube we-eclectic wokufunyanwa kwevenkile eyinkunkuma kunye nefenishala ethambileyo ethambileyo. Iincwadi kunye nemidlalo yebhodi yakudala inikezelwe.
Iimephu zePathfinder zibonisa ezona ndlela zihamba phambili zohambo lwasekuhlaleni ecaleni komlambo iTowy entle, kwihlathi elizaliswe ziingoma zeentaka, okanye kwiincopho zeenduli ezinembono emangalisayo.
Intlambo yeTowy ephezulu yindawo ekhethekileyo enezilwanyana zasendle ezityebileyo ezibandakanya, i-pied Flycatchers, i-Red Kites, i-Foxes kunye ne-Polecats. Iintyatyambo zalapha ekhaya zikwathandeka, iikhaphethi zekhephu emhlabeni ziphawula iindawo zezindlu ezichithekileyo ngoFebruwari, zilandelwa ziintyatyambo ezityheli zeenkwenkwezi zaseCelandines, iiDaffodils zigcwele ihedgerows ngoMatshi, kwaye iNtwasahlobo iya ehlotyeni kunye neRed Campion, iHoneysuckle kunye neMeadowsweet. iindlela.
4.71 · Izimvo eziyi-41
Isitalato sinobubele kakhulu kwaye samkelekile kwiindwendwe. Zimbini ii-pubs ezilalini, iRoyal Oak emazantsi enduli kunye neTowy Bridge Inn malunga nekhilomitha ukuya entlanjeni. Bobabini babonelela ngokutya okuphekwe ekhaya. Intlambo yiparadesi yabahambi ngeendawo ezimangalisayo umlambo omhle, kunye nentabalala yezilwanyana zasendle.
I love books, cats, gardens, walking and nature.
Ndihlala ndifumaneka xa kufuneka kwaye ndihlala imizuzu emi-5 kude nentlambo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rhandirmwyn